फ्रान्सबाट फर्किएकी किशोरीमा संक्रमण, कहाँ भयो कमजोरी ? – HostKhabar ::
फ्रान्सबाट फर्किएकी किशोरीमा संक्रमण, कहाँ भयो कमजोरी ?
काठमाडौं l नेपालमा दोस्रो पटक कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) संक्रमण देखिएको छ। फ्रान्सबाट फर्किएकी १९ वर्षीया किशोरीको आइतबार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा भाइरस पोजिटिभ पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि आइतबार बेलुका उनलाई अस्पतालमा लगेका छौं’, मन्त्री भानुभक्त ढकालले सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा भने। मन्त्री ढकालका अनुसार संक्रमितको उपचार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भइरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकोे जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो। उनी चैत ४ गते कतारको दोहा ट्रान्जिट हुँदै काठमाडौं ओर्लिएकी थिइन्।
संक्रमित विद्यार्थीको गोपनीयतालाई ध्यानदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकालले विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरे। ‘उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘होम क्वारेन्टाइनबाट रेकर्ड पोजिटिभ आएपछि हामीले अस्पताल पुर्‍याएका हौं।’
कुल परीक्षण : ६१०
भाइरस नेगेटिभ : ६०८
भाइरस पोजिटिभ : २
(१ आइसोलेसनमा, १ निको भई फर्किएको )
भाइरस संक्रमितको परिवार र घरमै क्वारेन्टाइनमा रहँदा सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको परीक्षण र आइसोलेसनमा राख्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘उहाँसँगै आएका र उहाँसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई पनि खोजी गरी उपचारको दायराभित्र ल्याइनेछ’, उनले भने, ‘प्लेनमा आउँदा को – को आउनुभएको थियो ? हामी खोज्छौं।’ ती किशोरीले घर फर्किने क्रममा भियतनामकी साथीसँग कतारको राजधानी दोहासम्म सँगै यात्रा गरेकी थिइन्। उनीहरू दोहाबाट छुट्टिएर आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदा उनलाई ज्वरोलगायत कुनै लक्षणसमेत देखिएको थिएन। त्यसपछि उनी घरतर्फ लागेकी थिइन्।
पर्सिपल्ट बिहीबार भियतनामकी ती साथीले फोन गरी आफू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको र क्वारेन्टाइनमा बसेको जानकारी गराउँदा उनी झसंग भइन्। उनले शुक्रराज अस्पतालका निर्देशक डा। सागर राजभण्डारीसँग सम्पर्क गरेकी थिइन्। निर्देशक डा। भण्डारीले अस्पताल आउन भनेपछि शुक्रबार उनको थ्रोट स्वाब ( घाँटीको र्‍याल ) परीक्षण गरिएको थियो। ‘परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइयो’, उनले भने।
यसअघि चीनबाट फर्किएका एक नेपाली विद्यार्थीमा भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। उपचारकै क्रममा भाइरस नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो। सरकारले दुवै घटना विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ०का नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई राखेर सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनअघि नै डब्लूएचओको तथ्यांकमा नेपालमा दुई जनालाई संक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
कहाँ भयो कमजोरी ?
सरकारले युरोप, पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रका सबै मुलुकबाट सीधा उडान र जुनसुकै मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउने सबै यात्रुलाई आगमनमा ७ चैतदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, त्यसपछि पनि निर्बाध रूपमा विदेशी र नेपाली नागरिक विदेशबाट आएका थिए।
मन्त्री ढकालका अनुसार विदेशबाट आएकामध्ये ‘कतिपय’लाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। ‘अति प्रभावित र अति प्रभावित मुलुकबाट ट्रान्जिट भएर आएका नागरिकलाई यहाँ आउन नदिने भनेर हामीले निर्णय गर्‍यौं। चाहेर होस् वा नचाहेर होस्, कतिपय अपवादका घटना भए। नेपालीहरू उत्रिनुभयो’, उनले कमजोरी स्वीकार गर्दै भने, ‘निर्णय गरेको अवधिभन्दा पछि पनि आउने काम भयो।’
विदेशबाट आएका व्यक्ति सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने सरकारी निर्णयअनुसार ती किशोरी पनि बसेको उनले सुनाए। यसै क्रममा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउनेलगायत लक्षण देखिएपछि उनी शुक्रराज अस्पताल पुगेकी थिइन्। ‘विदेशबाट आएका व्यक्ति सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो। बीचमा आफूलाई शंका लागे सूचना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणपछि पोजिटिभ देखियो भने उपचारको जिम्मा सरकारले लिन्छ।’
सरकारले सातै प्रदेशमा गुणस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणलाई द्रुत ढंगले अघि बढाउने भएको छ। टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको उनले सुनाए। ‘प्रदेश मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसहितको बैठकबाट सामूहिक निर्णय पनि गरेका छौं’, उनले भने, ‘उहाँहरू पनि त्यो काममा लाग्नुभएको छ।’
धैर्य नगुमाऔं : मन्त्री ढकाल
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० करोडको कोष स्थापना गरेको छ। मन्त्रीहरूले एक÷एक महिनाको तलब कोषमा योगदान गर्नेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अत्यावश्यक सामग्री ल्याउने तयारी रहेको सरकारले जनाएको छ। ‘कूटनीतिक नियोग परिचालन गरेर भए पनि अत्यावश्यक सामग्री प्राप्त गर्न र हवाई सेवा बन्द भएकाले ल्याउन कठिनाइ हुन्छ कि भनेर हामीले नै प्लेनलाई पनि तयारी राखेका छौं’, मन्त्री ढकालले भने, ‘प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै आफंै गएर वा त्यहाँबाट प्राप्त गर्छौं।’
सरकारले भारत र चीनसँगको जोडिएका सबै सीमा नाकाबाट एक साता आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘थप सावधानी अपनाएर संक्रमणलाई विस्तारित हुन नदिने कुरामा सबैको योगदान हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘आग्रह गर्दछु। सबैले धैर्य नगुमाऔं।’